Home Wararka Axmed Karaash oo ku guuleystay xabad joojin ka hirgasha Saax-Meygaag (Sawiro)
Axmed Karaash oo ku guuleystay xabad joojin ka hirgasha Saax-Meygaag (Sawiro)
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash, iyo Wafti uu hoggaaminayo oo ku sugan maalinkii afaraad deegaanka Saax-meygaag, ayaa wada kulamo xal loogu raadinayo dagaalo culus oo labo maleeshiyo beeleed ku dhexmaray deegaanka.
Dagaaladan ayaa salka ku haya muran la xariira deegaameynta Saax-meygaag iyo Senga-jebiye, dagaal axadii dhacay ayaana sababay dhimashada in ka badan 35 ruux oo dhinacyada dagaalamay ah.
Madaxtooyada Puntland ayaa baahisay maanta in Madaxweyne kuxigeenka Puntland, iyo waftigiisu ay ku guuleysteen xabad-joojin laga sameeyo deegaanka Saax-meygaag, iyadoo berri loo gudbi doono Shirka nabadeynta ee lagu dhex dhexaadinayo Beelaha dirirtu dhexmartay.
Sidoo kale, Madaxtooyada ayaa sheegtay in Shirka nabadeynta oo berri furmi doona uu hoggaamin doono Madaxweyne Axmed Karaash, ayna ka qeybgali doonaan dhammaan Isimada iyo Waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada deegaanka.
Previous articleShirkii Wadatashiga Qaran oo markale natiijo la’aan ku soo dhamaaday
Next articleShirkii GWQ oo maalintii 4aad lasoo xiray Natiijo la’aan & Qodobbo la isku qabtay..
RW Roble oo war cusub kasoo saaray khilaafka Villa Somalia iyo...
Axmed Madoobe ‘dowladdu lama xisaabtanto amisom sidee al shabaab loga guleysan...